Vaovao - Dingana iray manakaiky kokoa amin'ny tanjony tsy hifoka sigara 2025 i Nouvelle Zélande
Ny New Zealand dia dingana iray manakaiky kokoa amin'ny tanjony 2025 tsy misy sigara
Nihena ny tahan'ny mpifoka sigara any Nouvelle-Zélande.
Araka ny fanadihadiana vaovao natao tamin'ny kilasy fahafolo maherin'ny 26.600, ny tahan'ny fifohana sigara (paraky mahazatra) any Nouvelle-Zélande dia nidina ho ambany indrindra, nahatratra ny tanjona tamin'ny taona 2025 ho tsy mifoka sigara - tahan'ny latsaky ny 5 isan-jato isan-jato. andro.Ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa ny isan'ny 13 sy 14 taona mifoka sigara isan'andro dia nidina avy amin'ny 2 isan-jato tamin'ny taona 2019 ho 1,3 isan-jato tamin'ny taona 2021.
Nilaza ihany koa izy ireo fa nihena be ny tahan’ny fifohana sigara teo amin’ireo mpianatra avy amin’ny foko rehetra.Raha oharina tamin'ny taona 2019, dia nihena avy amin'ny 40 isan-jato ny fiparitahan'ny fifohana sigara teo amin'ny mpianatra Māori ka lasa 3,4 isan-jato monja izay fihenana be indrindra tao anatin'ny folo taona.Na izany aza, na dia nandao ny paraky nentim-paharazana aza ny mpianatra,sigara elektrônikaniakatra ny tahan'ny fifohana sigara.
Ankoatra izany, ny tahan'ny fifohana sigara isan'androe-sigara (fitaovana fanafanana)Niakatra avy amin'ny 3,1% tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 9,6% tamin'ny taona 2021. Ireo tanora tsy mitovy tamin'ny taona lasa, raha ny momba ny vaping, ity taranaka ity dia te hanandrana sy hiala voly.Ny 40%-n'ny tanora dia nilaza fa "te hanandrana fotsiny" ny vaping.Ankoatr'izay, 15% no nilaza fa "tiany".Ary, 16,1% no nilaza fa tokony "hiala amin'ny sigara nentim-paharazana".
Ho fanampin'izany, maherin'ny 75% ny tanora no mahazo ny vokatra vape avy amin'ny namana, zokiolona na olona ao amin'ny fianakaviana.Manoloana izany fironana izany, vao haingana ny governemanta Nouvelle-Zélande dia nampiditra fitsipika maromaro mifandraika amin'ny sigara elektronika manantena ny hiaro bebe kokoa ny tanora.
Ohatra, ny mpivarotra ankapobeny any Nouvelle-Zélande dia mahazo mivarotra sigara elektronika amin'ny tsiro telo: menthol matanjaka, menthol maivana (mint) ary tsiro paraky (paraky).Ary, ny taona farany ambany indrindra hividianana sigara elektronika dia 18 taona.
Noho izany antony izany, ny Minisiteran'ny Fahasalamana any Nouvelle Zélande dia nampitandrina fa ny sigara elektronika dia tsy mampidi-doza satria ny mpikaroka dia nahita carcinogens ao anaty ranon-tsigara elektrika.
Ampitahao amin'ny vokatra Vaping, misy karazana sigara elektrika hafa misarika ny saina bebe kokoa eny an-tsena.Tsy izanyHTP (vokatra fanafanana), fantatra ihany koa amin'ny hoe hafanana tsy mandoro vokatra.Ny HTP dia maneho rafitra fanamafisam-peo izay manafana ny vokatra mitovy amin'ny paraky amin'ny hafanana ambany ary manome traikefa mifoka sigara mitovy amin'ny sigara mahazatra.Portofolio HTP mahazatra misy fitaovana fanamafisam-peo sy fanamainana.